भारत भ्रमणले दुई देश विचको सम्वन्धमा थप सुधार हुन्छ : पोख्रेल « Tulsipur Khabar
भारत भ्रमणले दुई देश विचको सम्वन्धमा थप सुधार हुन्छ : पोख्रेल
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रधानमन्त्री केपी वलीको भारत भ्रमणबाट दुई देश विचको सम्वन्धमा थप सुधार हुने बताउनु भएको छ । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल दाङले बुधवार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पोख्रेलले भ्रमणले छिमेकी देशहरुसंगको सम्वन्ध सुदृढ हुने र त्यसले देशको दिगो बिकासमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । त्यसबाट नेपालले प्रशस्त लाभ लिने दावि पनी गर्नु भयो । उहाँले दुई देश विच नयाँ सिरावाट सम्वन्ध व्यवस्थीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुने पनि बताउनुभयो । ‘‘यस अघि छिमेकी संग विवाद गर्ने कि लम्पसार पर्ने भन्ने वहस चल्थ्यो त्यो सवै नयाँ सिराबाट अगाडि वढछ उहाँले भन्नुभयो । भारतबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने भन्दै प्रोख्रेलले सम्वन्धलाई सुमधुर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सो अवसरमा बोल्दै उहाँले प्रदेश नं ५ लाई पर्यटन र कृषी क्षेत्रको हव बनाउने दिशामा आफूलागेको समेत बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले पाँच नं प्रदेश सवै दृष्टीकोणले राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश भएको भन्दै पर्यटन र कृषीको राम्रो सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।‘‘ पाँच नं. प्रदेश सवै किसीमले धनी प्रदेश छ, कृषी, पर्यटन र अन्य । कृषि र पर्यटनकोमात्र विकाश गर्न सकीयो भने यस प्रदेश संमृद्ध प्रदेश हुन सक्छ, हाम्रो पहिलो प्रयासपनि यही हुने छ । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भन्नुभयो । पोख्रेलले विकाशमा अव जनताको सहभागीता हुने गरी आफना निति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले अव देश आर्थिक संमृद्धीको बाटोमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले अव स्थीर सरकार गठन भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संमृद्धि दिसा तर्फ लैजाने विश्वास
समेत व्यक्त गर्नु भयो । ‘‘ अव सवै तिनै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भएकाछन्, सवै तहमा अधिकारहरुपनि बाडफाड भएको छ, जेष्ठ १५ देखि अव सवै तहमा व्यवस्थीत तरिकाले काम सुरु हुन्छ, आर्थिक संमृद्धि तर्फ देश जानेछ ’’ पोख्रेलले भन्नु भयो । ्कार्यक्रमको संचालन क्लवका सचिव विमल गौतमले गर्नुभएको थियो ।
्यसैविच मुख्य मन्त्रि पोख्रेललाई एन प्याव्सनले स्वागत तथा सम्मान गरेको छ । सो अवसरमा एन प्याव्सन प्रदेश नम्वर ५ का संयोजक सुवोध कुमार डागि , केन्द्रीय सदस्य प्रकाश कुमार शर्मा र दाङ जिल्ला अध्यक्ष भिम बहादुर बुढाथोकिले स्वागत तथा सम्मान गर्नु भएको थियो ।